Ungalibala Kanjani Ivelu Yesikhathi Sokuphila Yomsebenzisi Wakho We-App Yeselula | Martech Zone
Ungalibala Kanjani Ivelu Yesikhathi Sokuphila Yomsebenzisi Wakho Wokusebenza Kwamaselula
NgoMsombuluko, Agasti 22, 2016 NgoMsombuluko, Ephreli 4, 2022 Douglas Karr
Sineziqalo, izinkampani ezisunguliwe, ngisho nezinkampani ezihlaziya kakhulu nezinkimbinkimbi eziseza kithi zizosizwa ukukhulisa ibhizinisi lazo eliku-inthanethi. Akunandaba ngosayizi noma yinkimbinkimbi, lapho sibuza ngabo izindleko-ngokutholwa ngakunye futhi inani lempilo (LTV) yekhasimende, sivame ukuhlangana nokubukwa okungenalutho. Izinkampani eziningi kakhulu zibala amabhajethi ngendlela elula:
Ngalo mbono, ukumaketha kuphakama kuya kukholamu yezindleko. Kodwa ukumaketha akuyona izindleko ezifana nerenti yakho… kungukutshalwa kwemali okufanele ngabe kusebenza ukukhulisa ibhizinisi lakho. Ungalingeka ukubala ukuthi izindleko zokuthola ikhasimende elisha yinani elithile ledola, bese kuthi inzuzo iyinzuzo oyizuzile ekuthengeni kwabo. Inkinga yalokho ukuthi amakhasimende ngokuvamile awenzi ukuthenga okukodwa. Ukuthola ikhasimende yingxenye enzima, kepha ikhasimende elijabulayo alivele lithenge kanye bese lihamba - lithenga okuningi futhi lihlala isikhathi eside.
Liyini inani leKhasimende le-Lifetime Value (CLV noma i-CLTV) noma i-Lifetime Value (LTV)?
Inani lempilo yekhasimende (i-CLV noma i-CLTV kaningi), inani lamakhasimende lempilo yonke (i-LCV), noma inani lesikhathi sokuphila (i-LTV) inzuzo ebaliwe ikhasimende elizonikeza ngayo inkampani yakho. I-LTV ayigcini ngokuthengiselana noma inani lonyaka, ifaka phakathi inzuzo etholwe isikhathi sobudlelwano bakho nekhasimende.
Yini ifomula yokubala i-LTV?
I-LTV = Inani Lesikhathi Sokuphila
I-ARPU = Imali engenayo emaphakathi ngomsebenzisi ngamunye. Imali engenayo ingavela kuzindleko zohlelo lokusebenza, imali engenayo esuselwe ekubhaliseni, ukuthenga okungaphakathi nohlelo, noma imali yokukhangisa.
Ukuqhuma = Amaphesenti wamakhasimende alahlekile esikhathini esithile. Izicelo ezisuselwa ekubhaliseni zivame ukwenza imali yazo ngonyaka, ukukhishwa kwemali, kanye nezindleko.
Uma uthuthukisa uhlelo lokusebenza lweselula, nayi i-infographic evela ku-Dot Com Infoway - Bala i-Life Time Value (LTV) yabasebenzisi bakho bohlelo lokusebenza be-Massive Branding & Impumelelo - lokho kunikeza ukuhamba ngokusebenzisa ukukala i-LTV yomsebenzisi wohlelo lwakho lokusebenza lweselula. Ibuye inikeze ngezindlela ezithile zokunciphisa ukukhwabanisa nokwandisa inzuzo.
Akungabazeki ukuthi abantu abaningi ngokwengeziwe basebenzisa isikhathi sabo esiningi online kuzinhlelo zokusebenza zeselula. Yize lokhu kungasho abasebenzisi abaningi kuhlelo lwakho lokusebenza, nakanjani akusho ukuthi bonke abasebenzisi bakho bazoba nenzuzo. Njengoba kunjalo kumamodeli amaningi ebhizinisi, imali engama-80% ivela kubasebenzisi abangama-20%. Ukukala i-LTV yabasebenzisi kungasiza abathuthukisi bohlelo lokusebenza ukunciphisa abasebenzisi babo abahle futhi kudale okunikezwayo nezenyuso ukuklomelisa ukwethembeka kwabo ukukhulisa ukugcinwa. URaja Manoharan, uDot Com Infoway
Lapho usuqonda inani lempilo yekhasimende lakho, linganisa isilinganiso sakho se-churn, uhlaziye izindleko zokuthola ikhasimende, uzoqonda ukutshalwa kwemali okwenzayo kanye nembuyiselo emaphakathi kulolo tshalo-mali.
Ngemuva kwalokho ungenza ushintsho kunoma yikuphi noma kuzo zonke izinto eziguqukayo. Ungadinga ukwandisa izindleko zensizakalo yakho ukuze ugcine inzuzo enempilo. Ungahle udinge ukuthi utshale imali ethe xaxa ekusebenzeni kwamakhasimende ukugcina amakhasimende akho isikhathi eside futhi wandise imali engenayo kuhlelo lokusebenza noma esikhathini eside. Ungadinga ukuthi usebenze ukuze wehlise izindleko zokutholwa kwamakhasimende ngamasu we-organic kanye nokumela. Noma ungathola ukuthi empeleni ungachitha imali eningi kumasu wokuthola akhokhelwayo.
Tags: ukubalwachurnisilinganiso se-churnI-CLTVI-CLVizindleko ngokutholwa ngakunyeukutholwa kwamakhasimendeukugcinwa kwamakhasimendedcidot com infowayformulaindlela yokubala i-ltvinfographici-ltvuhlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula ltvukumaketha kohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula roiyini i-ltv
Kancane: Izibalo Zokushicilela Okuqukethwe Kwenziwe Kwesokudla
Amabhizinisi amaPhutha ama-4 enza lokho kulimaze i-SEO yasendaweni